By सपनासंसार August 01, 2010
हरेको मानिस सामाजिक प्राणी हो । जुन सुकै ठाउँमा भए पनि , आफुँ बसेको समाज प्रति हरेक मानिस को केही उत्तरदायित्व हुन आउछ । यही हेतुले, नेपाली समुदाय मिनिसोटा(ANMN) र अमेरिकन रेडक्रस द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा लगभग ४० जना सहभागीले रक्तदान गरेर आफ्नो सहभागिता जनाएका थिए। सम्पूर्ण रक्तदानका सहभागीहरुलाई निसुल्क नास्ता तथा जुस अनि बिस्कुट वितरण गरिएको थियो ! नास्ता लाई डेनिज ले प्रायोजन गरेको थियो !
उक्त कार्यक्रममा सहभागीको केही तस्विर हरु हेर्न तल आउनुहोस।
News मेरो कलम सुचना-समाचार
Labels: News मेरो कलम सुचना-समाचार